Nayjeeriya oo albaabbada u laabtay shirkado sameeya sharoobbada qufaca - BBC News Somali
Nayjeeriya oo albaabbada u laabtay shirkado sameeya sharoobbada qufaca
Image caption Dhalooyinkan sharoobbada qufaca ayaa waxaa lagu xayeysiiyay inay ku jirto maaddada codeine
Dowladda Nayjeeriya ayaa albaabbada u laabtay saddex shirkadood oo waaweyn oo daawada soo saara kaddib baaritaankii ay BBC ku sameysay dadka qabatimay sharoobbada qufaca ee ay ku jirto maaddada codeine.
Hay`adda Qaranka ee Maamulka iyo Xakameynta Cuntada iyo Daawada ee (Nafdac) ayaa sheegtay inay shirkadahaas ay u xirtay sababo la xiriira inay ku guul-darreysteen la shaqeynta kormeerayaasheeda.
Shirkadaha ayaan weli ka hadlin arrintaasi.
Baaritaankii BBC ayaa muujinaya in sharoobbada lagu iibiyo suuqa madow, ayna isticmaalaan dhalinyarada Nayjeeriya si ay ugu mirqaamaan.
Agaasimaha Nafdac Mojisola Adeyeye ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in shirkadaha Peace Standard Pharmaceuticals, Bioraj Pharmaceuticals iyo Emzor Pharmaceuticals albaabbada loo laabay, kaddib markii ay ku guul-darreysteen inay keenaan dukumentiyadii looga baahnaa.
Shirkadaha ayaa laga yaabaa in dib loo furo, waxayna ku xiran tahay sida ay ula shaqeeyaan baaritaanka ay waddo Nafdac.
Hay`adda ayaa mamnuucday wax soo saarka iyo soo dhoofinta sharoobbada qufaca ee ay ku jirto maaddada codeine 1-dii bishan May.
Mamnuuciddan ayaa timid maalin kaddib markii baaritaan dahsoon oo ay sameeyeen koox BBC ka tirsan ay muuqaal uga duubeen mid ka mid ah saraakiisha saree e shirkadda Emzor Pharmaceuticals oo sheegaya inuu suuqa madow ku iibin karo hal milyan oo kartoon toddobaadkii.
Emzor ayaa dafirtay inay suuqa madow la shaqeyso waxayna sheegtay inay shaqada ka tirtay ninkaasi ayna bilowday baaritaan.
Bioraj Pharmaceuticals ayaa sidoo kale beenisay inay wax qalad ah sameysay, iyadoo sheegtay in keliya sharoobbada qufaca ay u iibiso si sharci ah.
Peace Standard Pharmaceuticals ayaa iyadana dafirtay arrintaasi waxayna sheegtay inay keliya sharoobbada ka iibiso ganacsiyada sharciyeysan.
Sharoobbada qufaca ee la qabatimo ayaa ahayd mid sharci ah, balse waxaa arrin sharciga ka soo horjeedda ahayd in laga iibiyo dadka iyadoo uusan dhaqtar u qorin.